५३ वर्षका व्यावसायिक फुटबलर ! - Khelpati
मगलवार, भदौ २३, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
काजुयोसी मिउरा । फाेटाे : एजेन्सी
एजेन्सी । जापानीज लिग कपको दोश्रो चरणको खेलका समाचारले विश्वका प्रमुख समाचारमा प्राय स्थान पाउँदैनन् । तर गत महिना योकोहामा फुटबल क्लबले सागन टोसुसँग भिडेको समाचार प्रमुख बन्यो ।
योकोहामाका कप्ताम काजुयोसी मिउरा मैदानमा थिए । उनकै कारण सो खेल विश्व जगतमा `हट न्युज´ बन्यो । ५३ वर्षीय कप्ताम मिउराका कारण जापानीज लिगको समाचार प्रमुख समाचार बन्न सक्यो ।
५३ वर्षको उमेरमा खेलिरहेका उनको खेलले फुटबल समर्थकलाई प्रफुल्लित गराउँछ । उनको सम्झौता नविकरणका बारे थुप्रै न्युज एजेन्सीहरुले रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् । उनी सबैभन्दा बढी उमेरमा गोल गर्ने कीर्तिमानधारी खेलाडी हुन् ।
मिउराका करिअर खेलाडीहरुको औसत करिअर समय भन्दा १५ वर्षले बढी छ । मिउराको कथा १९७० विश्वकप, पेले र ८ मिलिमिटरको क्यामेराबाट सुरु हुन्छ ।
मिउराको जन्म शिजुवकामा फुटबल प्रेमि परिवारमा भएको थियो । उनका दाजु समेत व्यावसायिक फुटबल खेल्दथे भने पिता समेत फुटबलका ठुला समर्थक थिए ।
`बुबा १९७० को विश्वकप हेर्न मेक्सिको जानू भएको थियो । बुबाले खेलहरु ८ मिलिमिटरको क्यामेराले खिचेर ल्याउनु भएको थियो । त्यो समयमा पेले खेल्दै थिए । म त्यही हेरेर नै हुर्किएँ ।´ मिउराले सुनाए ।
१९७० मा मिउरा ३ वर्षका मात्रै थिए । तर घरकै क्यामेराले बनाइएको भिडिओ उनको मगजमा गढ्यो । `उक्त भिडिओ हेरेर म ब्राजिलको समर्थक भएँ । म सानैबाट व्यवसायिक फुटबलर बन्न चाहन्थेँ ।´ उनले थपे ।
मिउराको बाबुको सम्पर्क ब्राजिलमा थियो । उनले आफ्ना छोरालाई १५ वर्षको उमेरमा शिजुवका छाडेर ब्राजिल लगिदिए ।
`त्यो बेला जे-लिग (जापानीज लिग, १९९३ बाट सुरु) थिएन । त्यसैले जापानमै बसेर व्यवसायिक फुटबलर बन्न सम्भव थिएन ।´ मिउरा सम्झन्छन् ।
उनी साओ पाउलो लागे । त्यहाँ उनले युभेन्टससँग सम्झौता गरे । ५ वर्ष मिउरा त्यहीँ अरु साथीहरुसँग बसे । पोर्चुगिज भाषा केही हदसम्म जानेपनी उनलाई त्यहाँ भाषाले मुस्किल गरायो ।
`मैले त्यहाँको भाषा नजान्दा कठिनाइ भोग्नु पर्‍यो । चलन पनि निकै फरक थियो । यसले गर्दा मैले एक्लो महसुस गर्नुपर्‍यो । ´मिउराले भने ।
तर उनी जसरी भएपनी सफल हुन चाहन्थे । उनले अभ्यासका दौरान मैदानमा पोर्चुगिज सिक्न थाले । उनलाई फुटबल बाहेक अरु केहिमा पनि आफ्नो करिअर बढ्दैन भन्ने राम्रोसँग थाहा थियोे ।
ब्राजिल गएको तीन वर्ष पछि उनले सान्तोससँग सम्झौता गरे । उनले ब्राजिलमा विभिन्न क्लबबाट ४ वर्ष भन्दा बढी व्यवसायिक फुटबल खेले ।
सन् १९९० मा मिउरा जापान फर्किए । जापान आएको तीन वर्षमै उनी जापानीज लिगको `मस्ट भ्यालुएबल प्लेयर´ बने ।
सन् १९९४ मा उनी लोनमा इटालियन क्लब गेनोआमा गए । उनी सिरि ए मा खेल्ने पहिलो जापानी खेलाडी बने । सिरि एमा पहिलो खेल पछि सर्जरी गर्नुपरेको थियो ।
इटालीयन लिजेन्ड फ्र्यान्को बरेसीको टाउकोमा ठोक्किएपछी उनी घाइते भएका थिए । उनले इटालीमा एक सिजन बिताए। इटालीमा धेरै सफलता नपाएपनि उनले जापानमा भने ख्याती कमाइरहेका थिए ।
`उनको महत्त्वबारे बोल्न नै कठिन छ । जापानीज लिगको सुरुवात हुनुमा पनि उनको केही हात छ । अर्जेन्टिनामा डिएगो म्याराडोना भने झैँ जापानमा उनले सम्मान आर्जन गरेका छन् ।´जापानका फुटबल पत्रकार सिन कारोलले भने, `उनलाई आदर्श मान्ने दुईवटा पुस्ताका खेलाडी अहिले उनीसँगै खेलिरहेका छन् ।´
तर किन उनी यति लामो समय खेलिरहेका छन् ?
सन् २००५ मिउरा ३८ वर्षका हुँदा योकोहामाका लागि सम्झौता गरेका थिए । २००६ मा शिर्ष डिभिजनमा बढुवा हुँदा उनले टिमका लागि ३९ खेल खेलेका थिए ।
मिउरा १ सिजन पछि रेलिगेट भएपनि मिउरा योकोहामाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी बनिसकेका थिए । २०१६ मा उनले ४९ वर्षको उमेरमा टिमका लागि २० खेलमा दुई गोल गरे ।
मिउरा धेरै घाइते हुँदैनन् ।
`मलाई रिकभर हुन युवा खेलाडी भन्दा बढी समय लाग्छ । तर यो उमेरमा खेल्न जति नै गार्हो भएपनी खेलिरहने इच्छाशक्तीका कारण म खेलिरहेको छु ।´ मिउरा सुनाउँछन् ।
उनी फिट भएका कारण मात्र खेलिरहेका छैनन्, उनको प्रसिद्धिका कारण पनि उनी खेलिरहेका हुन् ।
`उनी खेलका बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् । उनलाई रेफ्रीइङ गर्नु मेरा लागि सौभाग्य थियो ।´ पूर्व रेफ्री समेत रहेका जे सकर म्यागेजिनका सम्पादक एलान गिब्सनले भने ।
उनको चर्चाका कारण योकोहामाका खेलमा ३-४ हजार बढी समर्थकले हेर्ने गरेका छन् । उनको यही चर्चाका कारण बढीभन्दा बढी प्रायोजकहरुले प्रायोजन गर्ने गरेका छन् जसले खेलाडी र क्लब दुवैलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।
उनको बयान गर्दै एक प्रशिक्षकले उनलाई पाण्डाको संज्ञा दिन्छन् जुन दुर्लभ एवं प्यारो हुन्छ । उनले यस सिजन लिगमा एक खेल पनि खेलेका छैनन्, गत सिजन उनले योकोहामाका लागि ३ खेल खेलेका थिए ।
सिन कारोलको बुझाई अनुसार मिउराको अनुभव योकोहामाको ड्रेसिङ रुमका लागि निकै महत्वपूर्ण छ र यसले जापानी समुदायको कथा पनि व्यक्त गरेको छ ।
`उनको परिश्रम र उनी आदर्श बन्नुले मिडिया तथा आम जनतालाई कुनै कुरा पनि अससम्भव छैन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।´ कारोलले भने ।
केबल यतिले मात्र मिउराको करियरको बारेमा बोल्न सक्दैन। समर्थक र प्रायोजकहरुको घचघचाहटले मात्रै कुनै पनि खेलाडीले ५३ वर्षको उमेरमा आफूलाई दिनरात फुटबलमा खटाउन सक्दैन ।
मिउरा आफ्नो परिश्रम र प्रतिवद्धताले मात्रै ५३ वर्षको उमेरमा खेलिरहन सकेको बताउँछन् । उनी अहिले पनि फुटबल खेल्न उत्तिकै रमाइलो लाग्ने र ब्राजिलमा १५ वर्षको उमेरमा भन्दा अहिले खेल्नुमा बढी रुचि लाग्ने बताउँछन् ।
-बीबीसीबाट अनिष भट्टराइकाे अनुवाद